PressReader - Isolezwe: 2018-09-14 - ISafa nethuluzi lokuthuthukisa onompempe
ISafa nethuluzi lokuthuthukisa onompempe
Isolezwe - 2018-09-14 - IMIBONO -
AKUNGABAZEKI ukuthi kumele sishayelwe elikhulu ihlombe isimemezelo sakamuva seSouth African Football Association (Safa) sokuthi isithole uxhaso oluvela kwa-OUTsurance.
Uxhaso luka-R50 million luzosiza onompempe ikakhulukazi emazingeni aphansi okuyi-ABC Motsepe, SAB League neSASOL Women’s League. Ngokusho kweSafa bazogxila kakhulu ekuqeqesheni abesifazane abathanda ukuba ngonompempe. Njengamanje kwi-Absa Premiership munye unompempe wesifazane okungu-Akhona Makalima.
Onompempe abazithola besuswa esigabeni esiphezulu, ngenxa yamaphutha abawenzayo, bazohlelelwa ukuthi bayoqeqeshwa ukuze bangavele nje balahlwe ngoba nakhu sebehliselwe ngezansi.
Kusuka kusasa onompempe sebezogqoka umfaniswano obhalwe OUTsurance hhayi wakwaNike abebewusebenzisa kumasizini edlule. Uxhaso lungase lugqugquzele intsha ukuthi ingene ekushayeni indweba ngoba kuyavela futhi ukuthi kuzoba nomehluko nangokwemihlomulo.
Phambilini onompempe abadlalisa kwi-ABC Motsepe bebethola amakinati alinganiselwa ku-R300 ngomdlalo. Ngaphezu kwalokho bebeba senkingeni yokwentula izinto zokuhamba ikakhulu uma beyodlalisa ezindaweni ezikude.
Ubuthola unompempe esenkashele emotweni elayishe iqembu ayolidlalisa ngakho njalo ukuswela. Lokhu bekusolakala ukuthi bekunomthelela ekukhwabaniseni imidlalo. Alikho iqembu elingeke lizame ukuthenga unompempe ebe egibele emotweni yalo. Nokho isethembiso seSafa sithi lokhu kuzoshintsha njengoba sekungenelele i-OUTsurance.
Ithemba elikhona elokuthi uxhaso luzosetshenziswa ngokuyikho kukhuliswe onompempe abasafufusa baze bayoshaya indweba kwi-Absa Premiership. Ukugxila kwabesifazane kuyancomeka ngoba kwamanye amazwe bayishaya ngokuzethemba indweba. Kufanele imidlalo yebhola labesifazane iphathwe abanye besifazane kungalokhu kungamadoda abadlalisayo.
Lokhu kuzokhulisa ukuzethemba kubona bakwazi nokudlalisa nemidlalo emikhulu yePremiership. ISafa isinikiwe ithuluzi lokuthuthukisa onompempe emazingeni aphansi nokukhuculula inkohlakalo.